Dowladda Soomaaliya oo saacado kadib ka jawaabtay go’aankii ay Kiinya ku hakisay xirirkii Soomaaliya – Kalfadhi
Dowladda Soomaaliya oo saacado kadib ka jawaabtay go’aankii ay Kiinya ku hakisay xirirkii Soomaaliya
February 17, 2019 Kalfadhi
Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Wada-shaqeynta Caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa, iyada oo ka jawaabeysa go’aanka ay Kenya ku hakisay xiriirkii diblomaasiyeed ee Soomaaliya, waxay sheegtay ineysan badda ay Soomaaliya iyo Kiinya ku muransan yihiin qeyb ka ahayn xirmooyinka xogtooda lagu soo bandhigay Ingiriiska dhawaan.
Warsaxaafadeed ay Wasaaraddu soo soosaartay ayey ku sheegtay iney aad uga xun tahay in ay Kiinya soo erido Safiirkeedii Neyroobi, iyada oo aysan jirin in arrintaas horay looga sii wada-hadlay. Waxay kaloo sheegtay, iyada oo ka jawaabeysa in ay Kiinya ku tilmaantay Xirmooyinka Shidaalka Soomaaliya “xaraash”, in aysan jirin meel Soomaaliya ka tirsan oo xaraash ah.
Wasaaraddu waxay sheegtay in meesha ay Kiinya ku tilmaameyso qariirad been ah ee ah badda, qeybta ay Soomaaliya ku haysato, ay arrinteedu hortaalo Maxkamadda Cadaaladda Aduunka (ICJ), ayna sidii ay waligeedba soo ahayd ay Soomaaliya difaacan doonto madax-banaanideeda dhuleed, tan siyaasadeed, sharafkeeda iyo midnimadeeda, taasina ay tahay waajib saaran Dowladda Soomaaliya.
Wasaaradda Arramiha Dibadda Soomaaliya waxay xustay in shacabka Soomaaliya iyo Kiinya uu ka dhexeeyo xiriir soojireen ah oo ah dhaqan, dhalyo iyo deegaan, taasoo ay sheegtay in dhib kasta iyo waxyeelo kasta oo soo kororta aysan meesha ka saari karin. Waxay, saasdaraadeed, sheegtay in ay Dowladda Soomaaliya sii wadi doonto la shaqeynta walaalaha Kiinya, ayna sidaas oo kale ku boorineyso Dowladda Kiinya, sida ay hadalka u dhigtay.
Hoos ka aqriso warqadda Wasaaradda Arrimaha Dibadda, haddii aad aqriso Ingiriiska.
Xildhibaan Cabdicasiis Gacamey oo dhaliilay habka warbaahinta loogu bandhigay dad la tuhusan yahay in ay dilal ka geysteen Boosaso
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, ayaa xalay warbixinta doorashada ka dhegeystay guddiga hirgalinta doorashooyinka dadban ee...